Uhambo losuku ukuya eSalzburg ukusuka eVienna
Uhambo loSuku oluya eSalzburg
Corpus Christi eOstriya
Indlela yokuHamba iKarst
Kwi-Neustadt yaseSalzburg, ekwabizwa ngokuba yiAndräviertel, emantla eMirabell Gardens, kukho indawo enengca egcwele imfumba, enomfanekiso oqingqiweyo, indawo leyo ebizwa ngokuba yiKurpark, apho indawo ejikeleze iAndräkirche yadalwa emva kokuphanziswa kweendawo ezazifudula zinkulu. . Igadi ye-spa inemithi emininzi emidala efana nobusika kunye ne-linden yasehlotyeni, icherry yaseJapan, i-robinia, umthi we-katsura, umthi wendiza kunye nemephu yaseJapan.
Umzila weenyawo ozinikele kuBernhard Paumgartner, owaziwayo nge-biographies yakhe malunga ne-Mozart, uhamba ecaleni komda kunye nedolophu endala kwaye udibanisa i-Mariabellplatz kunye nokungena ukusuka e-Kurpark ukuya kumgangatho omncinci ophantsi, indawo esemantla ye-Mirabell Gardens. Nangona kunjalo, ngaphambi kokuba ungene ezigadini unokufuna ukufumana indawo yangasese yoluntu kuqala.
Ukuba ujonga iSalzburg ungasentla unokubona ukuba esi sixeko simi phezu komlambo kwaye macala omabini imida yeenduli ezincinci. Kumzantsi-ntshona kukho iarc yesangqa ebandakanya iFestungsberg neMönchsberg kwaye kumntla-mpuma yiKapuzinerberg.
Intaba eyinqaba, iFestungsberg, yeyecala elingasentla leSalzburg Pre-Alps kwaye iqulathe ubukhulu becala ilitye likalika laseDachstein. I-Mönchsberg, i-Monks' Hill, iquka i-conglomerate kwaye idibanisa kwintshona yentaba yenqaba. Ayizange irhuqwe yiSalzach Glacier kuba imi kumthunzi wentaba eyinqaba.
I-Kapuzinerberg, kwicala lasekunene lomlambo njengentaba yenqaba, yeyomda osemantla weSalzburg Limestone Pre-Alps. Iqulathe ubuso bamatye aphakamileyo kunye necrest ebanzi kwaye ubukhulu becala yenziwe ngamatye ekalika eDachstein kunye nelitye le dolomite. Isiphumo sokukhuhla kweSalzach Glacier sinike iKapuzinerberg ukumila kwayo.
Indlu yangasese kawonke-wonke e-Mirabell Gardens Square eSalzburg
IiGadi zeMirabell zihlala ziyindawo yokuqala yokutyelela kuhambo losuku oluya eSalzburg. Iibhasi ezifika kwisiXeko saseSalzburg zivumela abakhweli bazo ukuba behle iT-junction yesitalato saseParis-Lodron kunye neMirabell Square kunye neDreifaltigkeitsgasse, isikhululo sebhasi emantla. Ukongeza, kukho indawo yokupaka iimoto. iCONTIPARK Parkplatz Mirabell-Congress-Garage, kwi-Mirabell Square apho idilesi echanekileyo yi-Faber Straße 6-8. Yi le ikhonkco ukuya kwindawo yokupaka iimoto ngeemephu zikagoogle. Ngaphesheya nje kwesitrato kwi-Mirabell Square inombolo 3 kukho indlu yangasese yoluntu esimahla. Eli khonkco kwiimephu zikaGoogle ikunika eyona ndawo ichanekileyo yendlu yangasese yoluntu ukukunceda ekuyifumaneni kumgangatho ongaphantsi wesakhiwo esingaphantsi komthunzi obonelela ngemithi.
Unicorn eSalzburg Mirabell Gardens
I-neo-baroque ye-marble staircase, usebenzisa iinxalenye ze-balustrade ukusuka kwi-theatre yedolophu ediliziweyo kunye nemifanekiso eqingqiweyo ye-unicorn, idibanisa i-Kurgarten emantla kunye nomgangatho omncinci womhlaba we-Mirabell Gardens emazantsi.
I-unicorn sisilwanyana esifana ne ihashe nge uphondo ebunzi. Kuthiwa sisilwanyana esinoburhalarhume, esinamandla nesinobukhazikhazi, kangangokuba sinokubanjwa kuphela xa kubekwe intombi enyulu phambi kwaso. I-unicorn igxumela kwingubo yentombi, iyayincela kwaye iyikhokelela kwibhotwe lokumkani. Amanyathelo eterrace asetyenziswa njengesikali somculo esitsibayo nguMaria kunye nabantwana bevon Trapp kwiSandi soMculo.
IiUnicorns kuManyuko ukuya kwiMirabell Gardens
Ii-unicorns ezimbini zamatye amakhulu, amahashe anophondo entloko, elele emilenzeni yawo agada "Amanyathelo omculo", isango lokungena emantla kwi-Mirabell Gardens. Amancinci, kodwa amantombazana anentelekelelo ayonwabile ukuwakhwela. Ii-unicorns zilele ngokufanelekileyo kwizitepsi ukuze amantombazana amancinci anyathele kuwo ngokuthe ngqo. Izilwanyana ezisango zibonakala ziphembelela iimbono zamantombazana. Umzingeli kuphela unokutsala i-unicorn kunye nentombi enyulu enyulu. I-unicorn itsalwa yinto engabonakaliyo.
IMirabell Gardens ijongwe kwi "Amanyathelo oMculo"
I-Mirabell Gardens yigadi ye-baroque e-Salzburg eyinxalenye ye-UNESCO World Heritage Historic Centre yeSixeko sase-Salzburg. Uyilo lweGadi ye-Mirabell ngendlela ekuyo ngoku yagunyaziswa yiNkosana u-Archbishop Johann Ernst von Thun phantsi kolawulo luka-Johann Bernhard Fischer von Erlach. Ngo-1854 iMirabell Gardens yavulelwa uluntu nguMlawuli uFranz Joseph.
I-Baroque Marble Staircase Mirabell Palace
I-Mirabell Palace yakhiwa ngo-1606 yinkosana-ubhishophu omkhulu uWolf Dietrich ngenxa yentanda yakhe uSalome Alt. I-"Baroque Marble Staircase" ikhokelela kwiHolo yeMarble yaseMirabell Palace. Izinyuko ezine ezidumileyo (1722) zisekelwe kuyilo lukaJohann Lucas von Hildebrandt. Yakhiwa ngo-1726 nguGeorg Raphael Donner, umkroli obaluleke kakhulu kuMbindi waseYurophu ngexesha lakhe. Esikhundleni se-balustrade, ikhuselekile kunye neengqungquthela ezicingelwayo ezenziwe nge-C-arcs kunye ne-volutes kunye nemihlobiso ye-putti.
Mde, oneenwele ezibomvu ezimdaka namehlo angwevu, uSalome Alt, oyena mfazi umhle edolophini. UWolf Dietrich wamazi ngexesha lomnyhadala kwigumbi lokusela eWaagplatz. Apho kwaqhutywa iibhodi zebhunga lesixeko zaza zafikelela esiphelweni izifundo zemfundo. Emva konyulo lwakhe njengeNkosana uBhishophu omkhulu uWolf Dietrich wazama ukufumana ixesha awayeza kuba nako ukuba njengomfundisi atshate. Nangona iinzame zokulamla zikamalume wakhe, uCardinal Marcus Sitticus von Hohenems, le projekthi ayiphumelelanga. Ngo-1606 waba ne-Altenau Castle, ngoku ebizwa ngokuba yi-Mirabell, eyakhelwe i-Salome Alt, imodeli yase-Roman "Ville suburbane".
Pegasus phakathi kweengonyama
I-Bellerophon, iqhawe elikhulu kunye nombulali wezilo ezikhulu, ukhwele ihashe elibhabhayo elibanjiweyo. Eyona nto ayenzileyo yayikukubulala eli rhamncwa Chimera, umzimba webhokhwe onentloko yeengonyama nomsila wenyoka. I-Bellerophon yafumana ukungathandeki koothixo emva kokuzama ukukhwela iPegasus ukuya Intaba yeOlimpiki ukuzibandakanya nabo.
Umthombo wePegasus ukuba uMaria kunye nabantwana batsibe bephuma kwiSandi soMculo ngelixa becula iDo Re Mi. Pegasus, lo yintsomi nguThixo ihashe uyinzala kaYe Olimpiki unkulunkulu Poseidon, uthixo wamahashe. Kuyo yonke indawo ihashe elinamaphiko labetha emhlabeni uphuphu lwalo, kwagqabhuka umthombo wamanzi ashushu.
Iingonyama ezigada iBastion'Izinyuko
Iingonyama ezimbini zamatye ezilele eludongeni lwenqaba, enye ingaphambili, enye iphakame kancinane ijonge esibhakabhakeni, igada isango elisuka kumgangatho ophantsi omncinane ukuya kwigadi enqatyisiweyo. Kwakukho iingonyama ezintathu kwidyasi yeengalo zase Babenbergs. Ngasekunene kwidyasi yesizwe yaseSalzburg kukho ingonyama emnyama ethe nkqo ejike yasekunene kwigolide kwaye ekhohlo, njengakwidyasi yesizwe yase-Babenberg, ibonisa ibha yesilivere ebomvu, ikhaka lase-Austrian.
IZwergerlgarten, iPaki yeGnome Dwarf
Igadi encinci, enemikrolo eyenziwe ngebhastile laseMount Untersberg, yinxalenye yegadi ye-baroque Mirabell eyilwe nguFischer von Erlach. Ngexesha le-baroque, abantu abakhulileyo nabafutshane babeqeshwe kwiinkundla ezininzi zaseYurophu. Babexatyiswa ngenxa yokunyaniseka nokuthembeka kwabo. I-dwarves kufuneka isuse bonke ububi.
I-Western Bosket ene-Hedge Tunnel
Ibosquet yebharoque eqhelekileyo yayisikwe ngobuchule "umthi" kwigadi yeBaroque Mirabell kaFischer von Erlach. Imithi kunye neeheji zazityhulwa yi-axis ethe tye enobubanzi obufana neholo. I-bosket ke ngoko yenza umlinganiso kwisakhiwo senqaba kunye neepaseji zayo, izinyuko kunye neeholo kwaye yasetyenziswa ngendlela efanayo nengaphakathi lenqaba ukwenza iikonsathi zegumbi kunye nezinye izinto ezincinci zokuzonwabisa. Namhlanje ibhoskithi esentshona ye-Mirabell Castle ine-"avenue" enemigca emithathu yemithi ye-linden yasebusika, egcinwe kwimilo ye-geometrically efana netyhubhu ngokusikwa rhoqo, kunye ne-arcade ene-arch trellis ejikelezayo, itonela yothango UMaria kunye nabantwana babaleka behla ngelixa becula uDo Re Mi.
Iilili ezibomvu kwi-baroque flower bed design kwi-parterre yegadi enkulu ye-Mirabell Gardens, ubude bayo bujoliswe emazantsi kwicala lenqaba yaseHohensalzburg ngaphezu kwedolophu endala ukuya ngasekhohlo kweSalzach. Emva kwe-secularization ye-Archdiocese yaseSalzburg ngo-1811, igadi yaphinda yachazwa kwisitayile sangoku segadi yesiNgesi yiNkosana uLudwig waseBavaria, kunye nenxalenye yeendawo ze-baroque ezigcinwe.
Ngowe-1893, ummandla wegadi wancitshiswa ngenxa yokwakhiwa kweSalzburg Theatre, esisakhiwo esikhulu esimelene nomzantsi-ntshona. Ithiyetha yeSizwe yaseSalzburg eMakartplatz yakhiwa yifem yaseViennese iFellner & Helmer, egxile kulwakhiwo lweethiyetha, njengeTheatre yesiXeko esitsha emva kwethiyetha yakudala, eyakhiwa ngu-Archbishop u-Hieronymus Colloredo ngo-1775 endaweni yegumbi lebhola. zidilizwe ngenxa yokusilela kwezokhuseleko.
Imifanekiso eqingqiweyo "yababiyeli beBorghesi" ekungeneni kweMakartplatz ihambelana ncakasana nemifanekiso eqingqiweyo esekwe kumfanekiso oqingqiweyo wenkulungwane ye-17 owafunyanwa kufutshane neRoma kwaye eseLouvre ngoku. Umfanekiso oqingqiweyo wobomi wamandulo wegorha elilwa nomkhweli ubizwa ngokuba yi-Borghesian fencer. I-Borghesian fencer yohlulwe ngophuhliso lwayo lwe-anatomical olubalaseleyo kwaye ke ngoko yayiyenye yemifanekiso eqingqiweyo ethandwa kakhulu kubugcisa beRenaissance.
Inkonzo kaBathathu Emnye eDreifaltigkeitskirche
Ngo-1694 iNkosana uBhishophu omkhulu uJohann Ernst Graf Thun kunye noHohenstein bagqiba ekubeni bakhe indlu yababingeleli entsha 'yeekholeji ezimbini ezasekwa nguye kunye necawa ezinikele kuBathathu Emnye, iDreifaltigkeitskirche, kumda osempuma wegadi yeHannibal ngoko, kwindawo ethambekileyo. indawo ephakathi kwesango lamaxesha aphakathi kunye nebhotwe leMannerist Secundogenitur. Namhlanje, isikwere seMakart, igadi yangaphambili yaseHannibal, ilawulwa yi-façade ye-Holy Trinity Church eyakhiwe nguJohann Bernhard Fischer von Erlach phakathi kwezakhiwo zekholeji, indlu yababingeleli abatsha '.
Indlu kaMozart kwiMakart Square eSalzburg
Kwi-"Tanzmeisterhaus", indlu engunombolo. I-8 eHannibalplatz, isikwere esinyukayo, esincinci, esixande esilungelelaniswe ecaleni kwe-axis yobude ukuya kwiCawa kaBathathu Emnye, eyathiywa igama elithi Makartplatz ngexesha lobomi bomzobi owamiselwa eVienna nguMlawuli uFranz Joseph I. Inkosi yomdaniso wenkundla yabamba izifundo zokudanisa izihandiba, uWolfgang Amadeus Mozart nabazali bakhe babehlala kwiflethi kumgangatho wokuqala ukusuka ngo-1773 de wafudukela eVienna ngo-1781, ngoku eyimyuziyam emva kwendlu yaseGereidegasse apho uWolfgang Amadeus Mozart wazalelwa khona yaba ncinane.
IFacade yeCawa kaBathathu Emnye
Phakathi kweenqaba eziphakamileyo, i-facade yeCawa kaBathathu Emnye ijiwulwa kwi-concave embindini enefestile engqukuva engqukuva ene-tendrils, phakathi kweepilasta eziphindwe kabini kunye nomboniso, odityaniswe neentsika eziphindwe kabini, ezakhiwa nguJohann Bernhard Fischer von Erlach ukusuka ngo-1694 ukuya ku-1702. IiTowers kumacala omabini aneentsimbi kunye neegables zewotshi. Kwi-attic, idyasi yeengalo zomseki ngegoso kunye nekrele, njengophawu lwesithethe lweNkosana u-Archbishop uJohann Ernst von Thun kunye noHohenstein, owasebenzisa amandla akhe okomoya nawehlabathi. I-concave central bay imema umbukeli ukuba asondele kwaye angene ecaweni.
Intambula, ikhonkco elidibanisayo, elisilinda, elivula ifestile evulekileyo phakathi kwecawe kunye nedome, lahlulwe laziiyunithi ezisibhozo ezineefestile ezincinci ezixande ngokusetyenziswa kweepilasta ezimbini eziethe-ethe. I-dome fresco yenziwe nguJohann Michael Rottmayr malunga ne-1700 kwaye ibonisa ukubekwa kukaMaria ngoncedo lweengelosi ezingcwele, abaprofeti kunye noosolusapho.
Kwisilingi kukho itambour yesibini encinci kakhulu ekwakhiwe ngeefestile ezixande. UJohann Michael Rottmayr wayengoyena mzobi uhlonitshwayo kwaye uxakekile weBaroque yokuqala eOstriya. Wayexatyiswe kakhulu nguJohann Bernhard Fischer von Erlach, ngokoyilo lwakhe iCawa kaBathathu Emnye yakhiwa yiNkosana uBhishophu omkhulu uJohann Ernst von Thun kunye noHohenstein ukusuka ngo-1694 ukuya ku-1702.
Salzburg Trinity Church Ngaphakathi
Igumbi eliphambili elimbhoxo lilawulwa kukukhanya okubengezela kwifestile esemi semicircular ebekwe ngasentla kwesibingelelo esikhulu, esahlulwe saba ngooxande abancinci, apho amaxande amancinci ahlulwe abe kubizwa ngokuba ziipaneli ze-slug kwi-honeycomb offset. Isibingelelo esiphakamileyo ekuqaleni sivela kuyilo lukaJohann Bernhard Fischer von Erlach. I-redos yesibingelelo yi-aedicula, isakhiwo sebhastile esineentsika zepilasta kunye necangca ecandiweyo yearch ecaba. UBathathu Emnye oNgcwele kunye neengelosi ezimbini ezinqulayo ziboniswa njengeqela leplastiki.
Ipulpiti enomnqamlezo womshumayeli ifakwe kwi-niche eludongeni ngasekunene. Iipewuli zikwiindonga ezine ezinediagonal kumgangatho webhastile, onepateni egxininisa umbhoxo wegumbi. Kwi-crypt i-sarcophagus enentliziyo yomakhi iNkosana uBhishophu omkhulu uJohann Ernst Bala uThun kunye noHohenstein ngokusekelwe kuyilo lukaJohann Bernhard Fischer von Erlach.
Francis Gate eSalzburg
Igesi yeLinzer, indlela ehamba phambili yedolophu endala yaseSalzburg kwibhanki yasekunene yeSalzach, ikhokelela ekuphakameni kwePlatzl ukuya eSchallmoserstraße kwindlela yaseVienna. Kungekudala emva kokuqala kweLinzer Gasse ekuphakameni kweStefan-Zweig-Platz iSango likaFrancis lihlala ngasekunene, ngasezantsi, kwicala leLinzer Gasse. I-Francis Gate yindawo ephakamileyo enemigangatho emi-2, isango elihambelana ne-rustic eliya kuStefan-Zweig-Weg ukuya eFrancis Port kwaye ukuya kwiCapuchin Monastery eCapuzinerberg. Kwi-crest ye-archway kukho i-cartridge yomkhosi eqingqiweyo enedyasi yeengalo zika-Count Markus Sittikus waseHohenems, ukusuka kwi-1612 ukuya kwi-1619 inkosana ye-archfoundation yaseSalzburg, umakhi weSango likaFrancis. Ngaphezulu kwekhatriji yomkhosi kukho isiqabu apho ukubekwa ibala kweHL. UFrancis ekuqulunqeni ngegable evuthelweyo ubonisiwe, ukusukela ngo-1617.
Izikhuselo zempumlo eLinzer Gasse Salzburg
Ingqwalasela yefoto ethathwe kwi-Linzer Gasse ikwizibiyeli zentsimbi ezikhandiweyo, ezaziwa ngokuba zizikhuseli zempumlo. Izikhuseli zempumlo zobuchwephesha zenziwe ngentsimbi ngabakhandi beentsimbi ukususela kumaXesha Aphakathi. I-craft epapashiweyo itsalwa ingqalelo kwiisimboli ezifana nesitshixo. Imibutho ngamaqumrhu amagcisa adalwe kumaXesha Aphakathi ukukhusela umdla ofanayo.
Kwi-Linzer Gasse no. 41 kukho iCawa yaseSebastian enecala layo elisemzantsi-mpuma elide kunye nenqaba yayo yefacade ngokuhambelana neLinzer Gasse. ICawa yokuqala yaseSt Sebastian yaqala ngo-1505-1512. Yakhiwa kwakhona ukusuka ngo-1749-1753. Isibingelelo esiphakamileyo kwi-apse engqukuva ehoxisiweyo sinesakhiwo sebhastile esithe nca kancinane esinezithungu zeentsika, iperi yeentsika eziveziweyo, i-cranked entablature ethe tye kunye nomphezulu ovolute. Embindini umfanekiso oqingqiweyo kunye noMariya kunye nomntwana ukusuka malunga ne-1610. Kwisicatshulwa kukho isiqabu seSaint Sebastian esivela kwi-1964.
Portal Sebastian Amangcwaba eSalzburg
Ukufikelela kumangcwaba aseSebastian ukusuka eLinzer Straße kuphakathi kwekwayara yeCawa yaseSebastian kunye ne-Altstadthotel Amadeus. I-arch portal ye-semicircular, ejikelezwe yi-pilasters, i-entablature kunye nephezulu ukusuka kwi-1600 kunye ne-gable evuthelweyo, equlethe idyasi yeengalo zomseki kunye nomakhi, iNkosana uBhishophu omkhulu uWolf Dietrich.
Amangcwaba aseSebastian adibanisa kumntla-ntshona weCawa yaseSebastian. Yakhiwa ukususela ngo-1595-1600 egameni likaBhishophu Omkhulu uWolf Dietrich endaweni yamangcwaba eyayikho ukususela ekuqaleni kwenkulungwane ye-16, imodeli ye-Italian Campi Santi. ICamposanto, isiTaliyane esithetha "intsimi engcwele", ligama lesiTaliyane lendawo yamangcwaba avaliweyo efana nentendelezo enearchway evulekileyo ngaphakathi. Amangcwaba aseSebastian ajikelezwe macala onke ziintsika zeentsika. I-arcades zigqunywe ngeevaults ze-groin phakathi kwamabhanti ane-arched.
Kumhlaba wamangcwaba aseSebastian ecaleni kwendlela eya kwimausoleum, umthandi weMozart uJohann Evangelist Engl wayenengcwaba elibonisa ingcwaba lentsapho yakwaNissen. UGeorg Nikolaus Nissen waba nomtshato wesibini kuConstanze, umhlolokazi uMozart. Uyise kaMozart uLeopold wangcwatyelwa kwindawo ebizwa ngokuba lingcwaba loluntu elinenombolo yama-83, namhlanje ingcwaba lika-Eggersche kwicala elingasezantsi lamangcwaba. UWolfgang Amadeus Mozart ubekwe eSt. Marx eVienna, unina eSaint-Eustache eParis kunye nodade uNannerl eSt. Peter eSalzburg.
Munich Uhlobo lwaseSalzburg
Kwikona yesakhiwo kwikona ye-Dreifaltigkeitsgasse / Linzer Gasse, ebizwa ngokuba yi "Münchner Hof", umfanekiso oqingqiweyo unamathele kumda ophumayo kumgangatho wokuqala, obonisa imonki enesitayile ephethe iingalo eziphakanyisiweyo, isandla sasekhohlo sibambe. incwadi. Idyasi esemthethweni yaseMunich yimonki ephethe incwadi yesifungo esandleni sayo sasekhohlo, kwaye ithatha isifungo ngasekunene. Idyasi yengalo yaseMunich yaziwa ngokuba yiMünchner Kindl. I-Münchner Hof ime apho kwakumi khona eyona ndawo indala yokuthengisa utywala eSalzburg, i-„Goldenes Kreuz-Wirtshaus“.
ISalzach iqukuqela emantla ukuya kwiInn. Ibizwa ngokuba yinqanawa yetyuwa eyayisebenza emlanjeni. Ityuwa evela eHallein Dürrnberg yayiyeyona nto ibalulekileyo yengeniso koobhishophu abakhulu baseSalzburg. I-Salzach kunye ne-Inn zibaleka kumda waseBavaria apho kwakukho iidiphozithi zetyuwa eBerchtesgaden. Zombini ezi meko zidibene zenza isiseko songquzulwano phakathi koBubhishophu Omkhulu baseSalzburg naseBavaria, olwafikelela kuvuthondaba lwazo ngo-1611 ngokuthathwa kweBerchtesgaden yiNkosana uBhishophu omkhulu uWolf Dietrich. Ngenxa yoko, uMaximilian I, iTshawe laseBavaria, wayithimba iSalzburg waza wanyanzela uBhishophu Omkhulu uWolf Dietrich ukuba arhoxe.
Kwiholo yedolophu unyathela kwisikwere seholo yedolophu. Ekupheleni kweholo yedolophu isikwere inqaba yeholo yedolophu ime kwicala le-axis ye-rococo facade yesakhiwo. Inqaba yeholo yedolophu endala imiswe ziipilaster ezinkulu eziphezu kwecornice ezineepilasta zekona. Kwinqaba kukho inqaba encinci yentsimbi enehexagonal enedome enamacandelo amaninzi. Inqaba yentsimbi iqulethe iintsimbi ezimbini ezincinci ukusuka kwi-14 kunye ne-16th inkulungwane kunye nentsimbi enkulu evela kwi-20th inkulungwane. KumaXesha Aphakathi, abahlali babexhomekeke kwintsimbi, njengoko iwotshi yenqaba yongezwa kuphela ngenkulungwane ye-18. Intsimbi yayinika abahlali ingqiqo yexesha kwaye yayikhaliswa xa kuthe kwatsha.
I-Alte Markt sisikwere esixande esichukunyiswe kwicala elimxinwa elisemantla kwisitalato saseKranzlmarkt-Judengasse kwaye sibanzi kwimilo yoxande emazantsi kwaye sivuleleke kwindawo yokuhlala. Isikwere sakhiwe ngomqolo ovaliweyo wezindlu zedolophu ezinemigangatho emi-5 ukuya kwezi-6, uninzi lwazo zezexesha eliphakathi okanye ukusuka kwinkulungwane ye-16. Izindlu ngokuyinxenye 3- ukuya 4-, ngokuyinxenye 6- ukuya 8-axis kwaye ubukhulu becala zineefestile zeparapet ezixande kunye neprofayili ene-eves.
Ukubalasela kweefacade ezicekethekileyo ezityatyekiweyo ezineefestile ezithe tye, isihombiso sesilabhu okanye isihombiso esithambileyo ukusuka kwinkulungwane ye-19 sisigqibo somlinganiswa wesithuba. I-Josephine slab style yasebenzisa izakhiwo ezilula kwi-suburbs, eziye zayinyibilikisa i-tectonic order kwiileya zeendonga kunye namacwecwe. Embindini wesikwere esisondeleyo kwi-Alter Markt kumi umthombo wangaphambili wemarike, ungcwaliswe kwi-St. Florian, kunye nekholomu ye-Floriani phakathi komthombo.
Iqula elinonxantathu owenziwe ngebhastile lase-Untersberg lakhiwa ngo-1488 endaweni yequla elidala lokutsalwa emva kokwakhiwa kombhobho wamanzi okusela osuka eGersberg phezu kwebhulorho yesixeko ukuya kwimarike endala. Igrile ehonjisiweyo, epeyintiweyo emthonjeni yaqala ngo-1583, iithenda zayo eziphela kwimibhobho eyenziwe ngentsimbi, iibexes, iintaka, abakhweli kunye neentloko.
I-Alte Markt sisikwere esixande esichukunyiswe kwicala elimxinwa elisemantla kwisitalato saseKranzlmarkt-Judengasse kwaye esibanzi kwimilo yoxande emazantsi kwaye sivuleleke kwindawo yokuhlala.
Isikwere sakhiwe ngomqolo ovaliweyo wezindlu zasedolophini ezinemigangatho emi-5 ukuya kwezi-6, uninzi lwazo ziphakathi okanye ukusuka kwinkulungwane ye-16. Izindlu ngokuyinxenye 3- ukuya 4-, ngokuyinxenye 6- ukuya 8-axis kwaye ubukhulu becala zineefestile zeparapet ezixande kunye neprofayili ene-eves.
Ukubalasela kweefacade ezicekethekileyo ezityatyekiweyo ezineefestile ezithe tye, isihombiso sesilabhu okanye isihombiso esithambileyo ukusuka kwinkulungwane ye-19 sisigqibo somlinganiswa wesithuba. I-Josephine slab style yasebenzisa izakhiwo ezilula kwi-suburbs, eziye zayinyibilikisa i-tectonic order kwiileya zeendonga kunye namacwecwe. Iindonga zezindlu zazihonjiswe ngemicu yepilaster endaweni yeepilaster ezinkulu.
Embindini wesikwere esisondeleyo kwi-Alter Markt kumi umthombo wangaphambili wemarike, ungcwaliswe kwi-St. Florian, kunye nekholomu ye-Floriani phakathi komthombo. Iqula elinonxantathu owenziwe ngebhastile lase-Untersberg lakhiwa ngo-1488 endaweni yequla elidala lokutsalwa emva kokwakhiwa kombhobho wamanzi okusela osuka eGersberg phezu kwebhulorho yesixeko ukuya kwimarike endala. IGersberg imi kumzantsi-ntshona wesiseko phakathi kweGaisberg kunye neKühberg, ekumazantsi ezantsi kumntla-ntshona weGaisberg. I-grille ehonjisiweyo, epeyintiweyo emthonjeni yaqala ngo-1583, iithenda zayo eziphela kwi-grotesques eyenziwe ngentsimbi, iibexes, iintaka, abakhweli kunye neentloko.
Kwinqanaba leFlorianibrunnen, kwicala elingasempuma lesikwere, kwindlu no. 6, yikhemesti yenkundla yenkosana-ubhishophu omkhulu eyasekwa ngo-1591 kwindlu enamafreyimu efestile ye-baroque kade kunye nophahla olune-apex volutes ukusuka embindini wenkulungwane ye-18.
Ikhemesti yenkundla yenkosana-ubhishophu omkhulu kumgangatho osezantsi inevenkile ye-3-axis ngaphambili ukusuka malunga ne-1903. Ikhemesti egciniweyo, amagumbi okusebenzela ekhemesti, aneeshelufa, itafile emiselweyo kunye neenqanawa kunye nezixhobo ezivela kwinkulungwane ye-18 yiRococo. . I ikhemisi yayikwindlu esebumelwaneni enguNo.7 kwaye yatshintshelwa kwindawo ekuyo ngoku, indlu engunombolo. 6, ngowe-1903.
Ikhefi Tomaselli eAlter Markt No. 9 eSalzburg yasekwa ngo-1700. Yeyona cafe indala eOstriya. UJohann Fontaine, owayesuka eFransi, wanikwa imvume yokupha itshokolethi, iti kunye nekofu kwindawo ekufutshane yaseGoldgasse. Emva kokufa kukaFontaine, indawo yokugcina ikofu yatshintsha izandla amaxesha amaninzi. Ngo-1753, indlu yekofu yase-Engelhardsche yathatyathwa ngu-Anton Staiger, umphathi wenkundla ka-Archbishop Siegmund III. Bala iSchrattenbach. Ngo-1764 u-Anton Staiger wathenga "i-Abraham Zillnerische yokuhlala kwikona yemarike endala", indlu ene-facade ene-axis emi-3 ejongene ne-Alter Markt kunye ne-4-axis facade ejongene ne-Churfürststrasse kwaye yabonelelwa ngodonga oluphantsi oluthambekileyo kunye nomgangatho ophantsi. Izakhelo zeefestile malunga ne-1800. I-Staiger yajika indlu yekofu yaba yindawo entle yodidi oluphezulu. Amalungu entsapho yakwaMozart neyakwaHaydn nawo ayesiya rhoqo Ikhefi Tomaselli. UCarl Tomaselli wathenga i-café ngo-1852 waza wavula i-kiosk ye-Tomaselli ejongene ne-café ngo-1859. I-porch yongezwa ngo-1937/38 ngu-Otto Prossinger. Emva kweMfazwe yesibini yeHlabathi, umMelika wasebenzisa ikhefi phantsi kwegama elithi Forty Second Street Café.
Isikhumbuzo seMozart nguLudwig M. Schwanthaler
U-Ludwig Michael von Schwanthaler, inzala yokugqibela ye-Upper Austrian sculptor family Schwanthaler, wadala isikhumbuzo sikaMozart kwi-1841 ngexesha lonyaka we-50 wokufa kukaWolfgang Amadeus Mozart. Umfanekiso oqingqiweyo wobhedu ophantse ube ziimitha ezintathu ukuphakama, owenziwa nguJohann Baptist Stiglmaier, umalathisi weziko lentsimbi ekrwada yasebukhosini eMunich, wamiswa ngoSeptemba 4, 1842 eSalzburg kumbindi wendawo eyayibizwa ngokuba yiMichaeler-Platz ngoko.
Umzobo we-bronze weklasikhi ubonisa i-Mozart kwindawo ye-contrapostal isiketi kunye nedyasi yangoku, i-stylus, iphepha lomculo (umsongo) kunye ne-laurel wreath. Imizekeliso eyenziwa njengemifanekiso yobhedu ifanekisela umsebenzi kaMozart kwimimandla yecawe, ikonsathi kunye nomculo wegumbi kunye neopera. IMozartplatz yanamhlanje yenziwa ngo-1588 ngokudiliza izindlu zedolophu ezahlukeneyo phantsi kweNkosana uBhishophu omkhulu uWolf Dietrich von Raitenau. Indlu iMozartplatz 1 ibizwa ngokuba yiNdawo yokuHlala eNtsha, apho iMyuziyam yaseSalzburg ihleli khona. Umfanekiso oqingqiweyo kaMozart sesinye sezona zifundo zidumileyo zeposikhadi kwidolophu endala yaseSalzburg.
Igubu leDome yaseKollegienkirche eSalzburg
Emva kwendawo yokuhlala, idrum dome yeCawa yaseSalzburg Collegiate Church, eyakhiwa kwindawo yeYunivesithi yaseParis Lodron ukusuka ngo-1696 ukuya ku-1707 yiNkosana u-Archbishop uJohann Ernst Graf von Thun kunye noHohenstein ngokusekelwe kuyilo lukaJohann Bernhard Fischer von Erlach phantsi kweliso lika. Umakhi wenkundla uJohann Grabner wahlulwe nge-octagonally ngemivalo emibini.
Ecaleni kwedome yegubu kukho iinqaba ezibharhileyo zeCawa yeeCollegiate, ezikoneni zazo onokubona imifanekiso eqingqiweyo. Ilanteni, isakhiwo esingqukuva esivulekileyo, sibekwe kwidome yegubu ngaphezulu kweliso ledome. Kwiicawa zeBaroque, isibane sihlala sisenza isiphelo sedome kwaye simele umthombo obalulekileyo wokukhanya kwemini.
Indawo yokuhlala yeSquare Salzburg
IResidenzplatz yadalwa yiNkosana u-Archbishop Wolf Dietrich von Raitenau ngokususa umqolo wezindlu zedolophu e-Aschhof malunga no-1590, isikwere esincinci esihambelana nesakhiwo esikhulu sanamhlanje se-Hypo e-Residenzplatz, esigubungela malunga ne-1,500 m², kunye nengcwaba lecathedral, elalisemantla e- iCathedral ekhoyo. Njengendawo yamangcwaba e-cathedral, amangcwaba aseSebastian adalwa kufuphi necawa yaseSt Sebastian kwibhanki ekunene yedolophu yakudala.
NgaseAschhof kunye nezindlu zedolophu, udonga oluluqilima lwalujikeleza amangcwaba e-cathedral ngelo xesha, udonga lwenqaba, olwalumele umda phakathi kwedolophu yasenkosana kunye nelokishi. UWolf Dietrich naye walubuyisela olu donga ngakwicathedral ngo-1593. Le yindlela eyakhiwe ngayo isikwere esiphambi kwendawo yokuhlala endala nentsha, eyayibizwa ngokuba sisikwere esikhulu.
INkundla yeArches Idibanisa iCathedral Square kunye noFranziskaner Gasse
Indawo ebizwa ngokuba yiWallistrakt, namhlanje ehlala inxalenye yeYunivesithi yaseParis-Lodron, yasekwa ngo-1622 nguBhishophu Omkhulu waseParis Count von Lodron. Isakhiwo sabizwa ngokuba yiWallistrakt kumhlali uMaria Franziska Countess Wallis.
Eyona ndawo indala yephecana laseWallis yindawo ebizwa ngokuba yiyard arch building enemigangatho emithathu eyenze udonga olusentshona lwecathedral square. Imigangatho yohlulwe ngezicangca eziphindwe kabini, ezityatyekiweyo ezithe tyaba ezihlala iifestile. I-facade ethe tyaba igxininiswe ngokuthe nkqo ngeepilasta zekona ezinqabileyo kunye neefestile zefestile.
Umgangatho omkhulu wesakhiwo se-arch yenkundla wawukumgangatho we-2. Emantla, imida kwiphiko lasezantsi lendawo yokuhlala, emazantsi, kwi-Archabbey yaseSt. Kumazantsi esakhiwo senkundla kukho iMyuziyam yaseSt. Peter, inxalenye yeDomQuartier Museum. Amagumbi kabhishophu omkhulu kaWolf Dietrich abekwe kule ndawo isemazantsi yesakhiwo senkundla.
Iindawo zemiboniso zinemigangatho emi-3, iholo enemigangatho emi-2 eyakhiwa ngo-1604 phantsi kweNkosana uBhishophu omkhulu uWolf Dietrich von Raitenau. Iingqameko zentendelezo zidibanisa i-Domplatz kunye ne-axis iFranziskanergasse Hofstallgasse, ehamba nge-orthogonally ukuya kwi-facade ye-cathedral kwaye yagqitywa ngo-1607.
Ngeentendelezo zentendelezo omnye wayengena kwibala elingaphambili lecawa yecathedral evela ngasentshona, ngokungathi udlula kwindonga yoloyiso. I-"porta triumphalis", eyayicetywe ekuqaleni ukuvula ngee-arches ezintlanu kwi-cathedral square, yadlala indima ekupheleni komngcelele wenkosana-ubhishophu omkhulu.
ICathedral yaseSalzburg inikezelwe kwihll. URupert kunye noVirgil. I-patronage ibhiyozelwa ngoSeptemba 24, uSuku lweSt. Rupert. I-Salzburg Cathedral sisakhiwo seBaroque esasungulwa ngo-1628 yiNkosana uBhishophu omkhulu waseParis Count von Lodron.
Indawo yokunqumla ikwimpuma, inxalenye engaphambili yecathedral. Ngaphezulu kwendawo yokunqumla kukho igubu eliphakamileyo leemitha ezingama-71 lecathedral elineepilasta zekona kunye neefestile ezixande. Kwidome kukho iifrescoes ezisibhozo ezinemiboniso evela kwiTestamente eNdala kwimiqolo emibini. Imiboniso inxulumene nemiboniso yePassion kaKristu kwi-nave. Phakathi kwemigca yeefrescoes kukho umqolo oneefestile. Ukumelwa kwabavangeli abane kunokufumaneka kwinxalenye yomphezulu wedome.
Ngaphezulu kweentsika ezinqamlekileyo ezinqamlekileyo kukho i-pendants ye-trapezoidal kwinguqu ukusuka kwisicwangciso somgangatho wesikwere sokuwela kwi-drum ye-octagonal. Idome inemilo yevault yemonki, enomgangatho ogobileyo othi ube mxinwa ukuya phezulu ngaphezulu kwesiseko se-octagonal segubu kwicala ngalinye lepholigoni. Kwi-vertex esembindini kukho isakhiwo esivulekileyo ngaphezulu kweso ledome, isibane, apho uMoya oyiNgcwele umi njengehobe. Indawo yokunqumla ifumana phantse konke ukukhanya okuvela kwilambu yedome.
KwiCathedral yaseSalzburg kungena ukukhanya kwekwayala ye-single-nave, apho isibingelelo esiphakamileyo esikhululekileyo, isakhiwo esenziwe ngebhastile elineepilasta kunye negayibhile egobileyo, evuthelweyo, kuntywiliselwa. Umphezulu wesibingelelo esiphakamileyo esinegayibhile engunxantathu evuthelweyo wenziwe ngefreyimu yee-volutes kunye neecariyatids. Iphaneli yesibingelelo ibonisa uvuko lukaKrestu kunye neHll. URupert noVirgil kwisicatshulwa. Kwi-mensa, itafile yesibingelelo, kukho i-reliquary yaseSt. Rupert kunye neVirgil. URupert waseka iSt. Peter, ikhaya loonongendi lokuqala eOstriya, uVirgil wayeyi-abbot yaseSt. Peter kwaye wakha icathedral yokuqala eSalzburg.
I-nave yeCathedral yaseSalzburg inamabhayi amane. I-nave ephambili ihamba kunye macala omabini ngomqolo wee-chapel kunye ne-oratorios ngasentla. Iindonga zakhiwe ngeepilasta ezimbini ngokulandelelana okukhulu, ezineeshafu ezigudileyo kunye neentloko ezidibeneyo. Ngaphezulu kweepilasta kukho i-entablature ejikelezileyo, egobileyo apho ivault yombhobho enemitya ephindwe kabini ixhomekeke kuyo.
I-cranking ngumzobo we-cornice ethe tye ejikeleze i-protrusion yodonga oluthe nkqo, ukutsala i-cornice phezu kwendawo eveleleyo. Igama elithi entablature liqondwa lithetha ukuphelela kwezinto ezithe tye zesakhiwo ezingentla kweentsika.
Kumagumbi phakathi kwepilaster kunye ne-entablature kukho ii-arcades eziphakamileyo eziphakamileyo, iibhalkhoni eziphumayo eziphumle kwii-consoles ze-volute kunye neengcango ze-oratory ezinamacala amabini. I-Oratorios, amagumbi amancinci okuthandazela ahlukeneyo, abekwe njengelogi kwigalari ye-nave kwaye aneengcango zegumbi elikhulu. Intetho yomlomo ayisoloko ivulelekile kuluntu, kodwa igcinelwe iqela elithile, umzekelo abefundisi, amalungu ocwangco, abazalwana okanye amakholwa awahlukileyo.
Iingalo ezinqamlezayo ze-single-nave kunye nekwayala nganye idibanisa kwidyokhwe yoxande ukuya kwi-square crossing in a semicircle. Kwi-conche, i-apse semicircular, ye-choir, i-2 yeefestile ezi-3 zefestile idibaniswe ngama-pilasters. Ukutshintshela ekunqumleni i-nave engundoqo, iingalo ezinqamlezileyo kunye nekwayala ixinzelelwe ngamaleko amaninzi eepilasta.
I-trikonchos izaliswe kukukhanya ngelixa i-nave ikwi-semi-ubumnyama ngenxa yokukhanya okungathanga ngqo kuphela. Ngokuchaseneyo neplani yomgangatho njengomnqamlezo wesiLatini, apho i-nave ethe tye kwindawo yokuwela inqunyulwa kwii-engile ezichanekileyo nge-transept ethe tye, kwikwayala ene-conchi ezintathu, i-trikonchos, iiconchi ezintathu, okt i-semicircular apses yobukhulu obufanayo. , emacaleni esikwere zifana nale isethi komnye nomnye ukwenzela ukuba isicwangciso somgangatho sibe nesimo seqabunga le-clover.
I-stucco emhlophe kunye ne-ornamental motifs yokuhlobisa kunye nomnyama kwi-undercuts kunye ne-depressions ihlobisa iifestoons, imbonakalo ehonjisiweyo ukusuka ngaphantsi kwee-arches, iipaseji ze-chapel kunye neendawo zodonga phakathi kweepilaster. I-stucco inabela phezu kwe-entablature nge-tendril frieze kwaye yenza ulandelelwano lwamasimi ejometri kunye neefreyimu ezidibeneyo kwivault phakathi kweechords. Umgangatho wecathedral uquka i-Untersberger eqaqambileyo kunye nebhastile elibomvu le-Adnet.
Inqaba yaseHohensalzburg imi kwiFestungsberg phezu kwedolophu endala yaseSalzburg. Yakhiwa nguArchbishop Gebhard, umntu obhityisiweyo we-Archdiocese yaseSalzburg, malunga no-1077 njengebhotwe laseRoma elinodonga olujikelezayo olujikeleze induli. U-Archbishop Gebhard wayesebenza kwinkundla yecawa yoMlawuli uHeinrich III, 1017 - 1056, uKumkani waseRoma-waseJamani, uMlawuli kunye noDuke waseBavaria. Ngowe-1060 weza eSalzburg njengobhishophu omkhulu. Uzinikele kakhulu ekusekweni kweDayosisi iGurk (1072) kunye neBenedictine monastery Admont (1074).
Ukususela ngo-1077 ukuya phambili kwafuneka ahlale e-Swabia naseSaxony iminyaka eyi-9, kuba emva kokubekwa kunye nokugxothwa kuka-Henry IV wajoyina ukumkani ochasayo uRudolf von Rheinfelden kwaye akazange akwazi ukuzibamba ngokumelene noHeinrich IV. kububhishophu bakhe abakhulu. Malunga ne-1500 iindawo zokuhlala phantsi kuka-Archbishop uLeonhard von Keutschach, owayelawula i-absolutist kunye ne-nepotist, zanikwa izinto ezintle kwaye inqaba yandiswa ukuya kwinkangeleko yayo yangoku. Ekuphela kwento engazange iphumelele ukuyingqinga le nqaba kwenzeka kwiMfazwe yamaPeasant ngowe-1525. Ukususela ekuyekisweni kobubhishophu omkhulu ngowe-1803, inqaba yaseHohensalzburg ibisesandleni sikarhulumente.
Kakade kwi-Middle Ages kwakukho "i-Rosstümpel" e-Kapitelplatz, ngelo xesha yayisembindini wesikwere. Phantsi kweNkosana u-Archbishop uLeopold Freiherr von Firmian, umtshana weNkosana u-Archbishop uJohann Ernst Graf von Thun kunye noHohenstein, i-cruciform complex eneekona ezigoso kunye ne-balustrade yakhiwa ngo-1732 ngokoyilo lukaFranz Anton Danreiter, umhloli oyintloko waseSalzburg. iigadi zenkundla.
Ukufikelela kwamahashe kwisitya samanzi kukhokelela ngokuthe ngqo kwiqela lemifanekiso eqingqiweyo, ebonisa uthixo wolwandle uNeptune ene-trident kunye nesithsaba kwihashe lolwandle elikhupha amanzi kunye neetritons ezi-2 ezikhupha amanzi emacaleni, izidalwa ezixubileyo, isiqingatha sazo. zibandakanya umzimba ophezulu womntu kunye nomzimba ophantsi onjengentlanzi kunye nomsila womsila, kwi-Round arch niche kwi-aedicule ene-pilaster ephindwe kabini, i-entablature eqondileyo kunye ne-gable egobileyo egobileyo enesithsaba se-vases yokuhombisa. I-baroque, i-sculpture ehambayo yenziwa ngumdwebi waseSalzburg uJosef Anton Pfaffinger, owayila umthombo we-Floriani kwi-Alter Markt. Ngaphezulu kwemvulo yokubukela kukho ikhronogram, umbhalo obhalwe ngesiLatini, apho oonobumba abakhulu abagxininisiweyo banika inani lonyaka njengamanani, kunye nengubo eqingqiweyo yeNkosana uBhishophu Omkhulu uLeopold Freiherr von Firmian kwibala legable.
Indawo yokuhlala yaseHercules Fountain Salzburg
Enye yezinto zokuqala ozibonayo xa ungena kwintendelezo enkulu yendlu yakudala esuka eResidenzplatz yigrotto niche enomthombo kunye noHercules ebulala inamba phantsi kwee-arcade zevestibule esentshona. Imizobo yeHercules zizikhumbuzo zobugcisa obugunyazisiweyo beBaroque obusetyenziswa njengendawo yezopolitiko. UHercules ligorha elidume ngamandla akhe, umzobo osuka kwiintsomi zamaGrike. Inkolo yamagorha yadlala indima ebalulekileyo kurhulumente, kuba isibheno kumanani angcwele amele ukusemthethweni kunye nokhuseleko oluqinisekisiweyo lobuthixo.
Umzobo wokubulawa kwenamba nguHercules wawusekwe kuyilo lweNkosana uBhishophu omkhulu uWolf Dietrich von Raitenau, owayenendawo yokuhlala entsha kwimpuma yecathedral eyakhiwe ngokutsha kunye nendawo yokuhlala kabhishophu omkhulu kwintshona yecathedral ubukhulu becala yakhiwa ngokutsha.
Igumbi leNgqungquthela lokuHlala eSalzburg
U-Hieronymus Graf von Colloredo, ubhishophu omkhulu wokugqibela wenkosana yaseSalzburg ngaphambi kokungena kwenkolo ngo-1803, wayeneendonga zamagumbi karhulumente wendawo yokuhlala ahonjiswe ngokuhonjiswa okuhle okumhlophe nangegolide ngumtyabeki wenkundla uPeter Pflauder ngokuhambelana nencasa yeklasikhi yexesha.
Izitovu zethayile zakudala ezigciniweyo zisusela koo-1770 kunye noo-1780. Ngowe-1803 ubhishophu omkhulu waguqulelwa ekubeni yinkokeli yehlabathi. Ngokutshintshela kwinkundla yasebukhosini, indawo yokuhlala yayisetyenziswa yintsapho yasebukhosini baseAustria njengendawo yokuhlala yesibini. I-Habsburgs inike amagumbi karhulumente ngefenitshala evela kwiHofimmobiliendepot.
Igumbi lenkomfa lilawulwa ngumbane wombane we-2 chandeliers, ekuqaleni ekujoliswe ukuba kusetyenziswe amakhandlela, exhonywe kwisilingi. I-Chamdeliers zizinto zokukhanyisa, ezikwabizwa ngokuba yi-"Luster" e-Austria, kwaye ngokusetyenziswa kwemithombo yokukhanya emininzi kunye neglasi yokukhanyisa ukukhanya kuvelisa umdlalo wezibane. IiChandeliers zihlala zisetyenziselwa iinjongo zokumela kwiiholo eziqaqambileyo.